Soo-saareyaasha Alaabada Garaafka iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda Badeecada Garaafka Shiinaha
Kaarboon Hexi waxay inta badan soo saartaa koronto-garaafyo. Ka sokow koronto-yaqaanada garaafka, waxaan sidoo kale soo saarnaa wax soo saarka garaafka qaarkood. Nidaamka waxsoosaarka ee alaabadan garaafka leh wuxuu leeyahay isla nidaam iyo kormeer tayo leh sida koronto-yaqaanada garaafyada. Alaabtayada garaafyada badanaa waxaa ka mid ah garaafka garaafka lagu dhejiyo, garaafka garaafka, usha garaafka iyo kaarboonka, iwm. Nidaamka wax soo saarka ee walxaha garaafka ayaa ah in la isku daro batroolka ...
Nidaamka wax soosaarka ee garaafka 'graphite block / graphite square' wuxuu la mid yahay kan korantada garaafka, laakiin ma ahan wax soo saar koronto ku shaqeeya. Waa shey laba jibbaaran oo koronto garaaf ah, oo ka samaysan walxaha wax lagu xiro garaafka iyadoo la jajabayo, la xoqayo, la garaacayo, la samaynayo, la qaboojinayo dubitaanka, qashin-qubka iyo garaaf garaynta. Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah jaantusyada garaafka / laba jibbaaranaha garaafyada, iyo habka wax soo saarku aad u adag yahay. Wareegga wax soo saarka guud waa in ka badan 2 bilood. Sida laga soo xigtay...
Ulaha garaafka ee ay soo saartay Shirkadda Hexi Carbon waxay leeyihiin habsami koronto oo wanaagsan, kuleylka kuleylka, saliidaynta iyo xasilloonida kiimikada. Ulaha garaafku way fududahay in la farsameeyo oo raqiis ah, waxaana loo isticmaali karaa codsiyo kala duwan: mashiinada, metallurgy, warshadaha kiimikada, shubista, aaladaha aan fiicnayn, dhoobada, semiconductors, daawada, ilaalinta deegaanka iyo wixii la mid ah. Inta badan ulaha garaafka ee ay soo saarto shirkaddeena waxaa macaamiisha u adeegsadaan qaybaha kuleylka korontada ku shaqeeya ee kuleylka kuleylka leh ee heerkulka sare ...
Foornada loo yaqaan 'Graphite' waxaa loo qaabeeyey oo dib-u-habayn ku samaysay Shirkadda Hexi cilladaha kharashka sarreeya iyo nolosha muddada gaaban ee madaxa naxaasku ka samaysan yahay foornada korontada ku jirta. Foornada tabinta ah ee loo yaqaan 'Graphite conductive' ayaa loo isticmaalaa halkii laga isticmaali lahaa foornada korontada ee madaxa naxaasta ah waxaana lagu dhejiyaa foornada korantada ee 6.3 MVA. Natiijo ahaan, nolosheeda adeeggu way dheertahay, tirada joogsiyada kulul ee foornada ayaa si weyn loo yareeyay, iyo qiimaha wax soo saarka si weyn ayaa loo dhimay. Tawxafka loo yaqaan 'Graphite tile' ayaa loogu magac daray qaabkiisa, kaas oo la mid ah foornada loo isticmaalo ...